Google Allo ကို Google Play စတိုးတွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ Androidsis
ယခုသင် Google Allo ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
သုံးရက်ကြာ Google Allo ရှိသည် ဖြန့်ဝေခဲ့သော APK ကိုကျေးဇူးတင်ပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Google Assistant နဲ့ဒီစာတိုပေးပို့ရေး app ကတန်ဖိုးရှိတဲ့သေးငယ်တဲ့သီလတွေကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ Allo သည်ထင်သည်ထက်များစွာပိုသည်။ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင် Google တင်ဆက်မည့်ထုတ်ကုန်အချို့သည်၎င်း messaging app ၏အားသာချက်ကို ၄ င်း၏ guts အတွင်း virtual assistant ရှိသည့်၎င်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထူးခြားသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုပြသလိမ့်မည်။
ယနေ့သင်သည် Google Play စတိုးမှ Google Allo သို့ကူးယူနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်စတင်နိုင်ပါသည် သင့်စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်ကိုသင့်သူငယ်ချင်းများအားအသိပေးပါ ဂူဂဲလ်၏လက်ဆံသည်၎င်း၏ဝင်ရိုးအဖြစ်ဂူဂဲလ်၏။ သင်၏ဗီဒီယိုသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်ပြောဆိုမှုများတွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရှာရန်၊ ခရီးလမ်းကြောင်းအတွက်မြေပုံကိုမျှဝေရန်သို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ရန်ဟင်းချက်ရန်အတွက်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုရှာဖွေရန်သင့်အကူအညီကိုပေးနိုင်သည်။ သင်သွားနိုင်တယ် ဤအကူအညီဖြင့် Google Assistant ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်.
Google Assistant vAllo ၏အင်ဂျင်ဖြစ်ရန် နှင့် Android နှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်ဟုအခြားဝန်ဆောင်မှုများအများအပြား။ ထိုနည်းတူစွာပင်၊ Google Home တွင်ဤ virtual assistant ကိုသင့်အိမ် the ည့်ခန်းထဲထည့်သွင်းပြီးဖြစ်လိမ့်မည် အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့တွင်တင်ပြခဲ့သည်.
လက်ထောက်တွင်သင်တတ်နိုင်သလောက်ကိုယ်ပိုင်စကားပြောဆိုမှု ၀ င်းဒိုးလည်းရှိသည် အခြားအမိန့်များအမျိုးအစားများကိုဖွင့်ပါ နှိုးစက်တစ်ခုသို့မဟုတ်သတိပေးချက် setting လိုပဲ။ သူ့ကိုသင်သိကျွမ်းနိုင်ပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ သင်သူ့ကိုလွှတ်လိုက်သောအမှာစာအားလုံးသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုသူအောင်မြင်စွာရှာဖွေနိုင်ကြောင်းသင်သတိပြုမိပါက၎င်းကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူသည်သင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိမ့်မည်။
Google Allo သည် chat app ဖြစ်သည် သင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် ၎င်းတွင်မက်ဂနီကိုမီးမောင်းထိုးပြရန် incognito chat သို့မဟုတ်အရွယ်အစားပြောင်းခြင်းအား emoticons သို့မဟုတ်စာသားများကဲ့သို့သောထူးခြားသောသီလအချို့ရှိသည်။ ၎င်းတွင် SMS ပံ့ပိုးမှု၊ desktop client တစ်ခုသို့မဟုတ်၎င်းကိုမတူညီသောကိရိယာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း; အရသိရသည်မကြာမီလာမယ့်လိမ့်မည်ဟုအင်္ဂါရပ်များ မိမိအအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး မနေ့ကကြေညာခဲ့သည်.
သင်ယခုသွားနိုင်သည် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ဖြတ်သန်းသွားရန်မမေ့ပါနှင့် လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကလျင်မြန်စွာဗွီဒီယိုဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ယခုသင် Google Allo ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
Google Allo နှင့်အတူပြproblemနာသည်အမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ လူမှုရေးကွန်ရက်များကဲ့သို့နှေးကွေးလာပြီး WhatsApp ကိုအစားထိုးရန်လူကြိုက်များခြင်းမရှိသောကြောင့်အဆုံး၌အသုံးပြုသူရှာနေသည့်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်သည် ... နှင့် WhatsApp သည်ပြီးပြည့်စုံပြီးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအခြေစိုက်စခန်း။
Galaxy S8 သည် 8895nm Exynos 10 ချစ်ပ်ဖြင့် Mali-G71 GPU ကိုအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်
Samsung က Galaxy Note7ပေါက်ကွဲမှုမှားယွင်းကြောင်းသတင်းများရရှိခဲ့